नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ? - नेपालबहस
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ?
| १२:५१:२२ मा प्रकाशित
११ चैत, काठमाडौं । शेयरबजारमा बुधबार पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ ।
आज बुधबार नेप्सेमा कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्येमा वोमी लघुवित्त, महिला लघुवित्त, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ को शेयरको उच्च देखिएको हो ।
वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था
बुधबार वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर उच्च माग देखिएको छ । वोमी लघुवित्त र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त एक आपसमा मर्जरमा गएपछि वोमी लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको थियो ।
लघुवित्तकाे रोक्का गरिएको कारोबार सोमबारदेखि फुकुवा भएसंगै लघुवित्तको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयरमूल्य ८ सय ४७ पुगेकाे छ । प्रतिशेयरमूल्य ८ सय नाघेपनि शेयर बेच्ने शून्य छन् । भने शेयर खरिद गर्नेको चने चाप देखिन्छ ।
महिला लघुवित्तको शेयरमा पनि उच्च माग देख्न सकिन्छ । कम्पनीले भर्खरै मात्र नेप्सेमा आईपीओ सूचीकृत गरेको हो । आज कम्पनीको शेयरमूल्य ४६३ रुपैया पुगेको छ ।
आज निफ्राको शेयरमा पनि उच्च माग छ । आज निफ्राको शेयर ५.७४ प्रतिशतले बढेर प्रतिशेयरमूल्य ५७१ रुपैया पुगेको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी
नेप्सेमा चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत गरेपश्चात आज बुधबासम्म आईपुग्दा बढोत्तरी कै यात्रामा बढिरहेको छ । कम्पनीले माघ २३ गते, शुक्रबार एक करोड ५३ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको थियो ।
नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि न्युनतम ९६ रूपैयाँ ६९ पैसादेखि अधिकतम २९० रूपैयाँ ७ पैसासम्मको कारोबार रेञ्ज प्रदान गरेको थियो ।
कारोबार सुरु भएदेखि चैत ११ गते सम्म आईपुग्दा कम्पनीको प्रतिशेयरमूल्य १९ सय पुगेको छ । प्रतिशेयरमूल्य १८९० पग्दा पनि शेयर बेच्ने शून्य छन् ।
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ
बुधबार सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथको शेयरको खरिदमा उच्च चाप लागेको छ ।
यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग
शेयरबजारमा न्यून शेयरमूल्य भएका पाँच कम्पनी, शेयरधनीलाई कति दिन्छन् लाभांश ? २ दिन पहिले
यो साता कुन कम्पनीको शेयरमूल्य उच्चदरले बढ्यो ? २ दिन पहिले
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका लाभांश घोषणा २ दिन पहिले
स्मार्टडोकोले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर, अनलाइन सामान खरिद गर्दा ६६ प्रतिशतसम्म छुट पाइने ३ दिन पहिले
९ कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले बढ्यो ३ दिन पहिले
सोमबार पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री हुने २१ मिनेट पहिले
धादिङको गजुरीमा दुई हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण २३ मिनेट पहिले
नेपाल समूहद्धारा आयोगमा लिखित निवेदन दर्ता ३० मिनेट पहिले
स्याङयोङ्गको आईएमएस मोटर्सले ल्यायो नव वर्ष अफर ४८ मिनेट पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो ५२ मिनेट पहिले
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह ५४ मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई २ घण्टा पहिले
खुशीको खबर ! अब छोराछोरी जन्माए तीन हजार पाइने ४ घण्टा पहिले
लिफ्टिङ्ग बिग्रिएपछि उदयपुर गढीमा खानेपानीको हाहाकार ७ घण्टा पहिले
ओलीको नयाँ दाउ–महन्थलाई प्रम बनाउ ८ घण्टा पहिले
बर्दियामा ‘बङ्गुर मिसन कार्यक्रम’,स्थानीयमा खुशी ४ घण्टा पहिले
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ३० गैँडा मरे ११ घण्टा पहिले
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा १५ वटै पुल चौडा गरिने ५ दिन पहिले
निजामती विधेयकविरुद्ध सिंहदरवार भित्रै विरोध प्रर्दशन,चार कर्मचारी पक्राउ ३ दिन पहिले
दक्षिण कोरियाको प्रधानमन्त्रीमा बुक्युम नियुक्त २ दिन पहिले
टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न संघ र प्रदेशलाई स्थानीय तहको आग्रह ४ दिन पहिले
सेप्टेम्बर ११ भित्रै अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने बाइडेनको तयारी ४ दिन पहिले
पत्रकारले पाए कोरोना बीमाबापतको रकम ४ दिन पहिले
जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ जनशक्ति छैनन् ३ दिन पहिले
नेपालगञ्जमा शुक्रबारदेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुने ३ दिन पहिले
सायद तिम्रो मेरो माया बस्यो की ? १ हप्ता पहिले
संगीत पत्रकारिता पुरस्कारबाट सुर्य चन्द सम्मानित १ हप्ता पहिले
कञ्चनपुरमा भेला, जात्रा, पर्व, भीडभाड गर्न रोक ४ हप्ता पहिले
विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णयलाई संघको स्वागत ३ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा रकम सङ्कलन गरी डोल्पामा सहयोग २ हप्ता पहिले
तीन दिनदेखि कर्णालीका पाँच जिल्लामा नेटवर्क अवरूद्ध ४ हप्ता पहिले
ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख भन्दा बढी १ हप्ता पहिले
रातो मच्छिन्द्रनाथलाई सोमबार बुङ्मती लगिने ७ महिना पहिले
नेपाल र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता सम्पन्न २ वर्ष पहिले
ओलीका मन्त्री धमाधम पैसा उठाउने धन्धामा ३ महिना पहिले
वीर अस्पतालमा आँखा निकालिएको घटनाको छानबिन गर्न कांग्रेस बीपीको माग ७ महिना पहिले